Blood of Madam Giselle - Boys Love - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ọbara Madam Giselle nkezi 4.5 / 5 si 10
NA / A, o nwere ihe nlere 50.2K
Mmụọ nnupụisi nke tọrọ atọ n'alụmdi na nwunye ya na di na-eme ihe ike, Giselle na-ebi ndụ nhụsianya na-arụ ọrụ nke nwanyị dị nwayọ na nwanyị. Ma n’otu abalị, na-agagharị n’ụlọ ọhụrụ ya, Giselle chọpụtara ihe dịka nwatakịrị nwoke tọrọ n’ime ebe dị n’ime ya. Ihe nketa sitere na nna di ya nke nwoke, a na-ahụta nwa nwoke ahụ ogologo anụ, “ifuru na-adịghị anwụ anwụ nke na-eri ọbara”. N'agbanyeghị ụjọ ya, Giselle malitere ileta nwa okoro ahụ n'abalị. Nzukọ a na-ezighi ezi ọ ga-etisasị ndụ dịka ọ maara ya?
Chapter 30 Nwere ike 18, 2021
Chapter 29 Nwere ike 18, 2021
Ihe nkuzi Piano (Kotobuki Taroko)
Dike Echefuru Ozi